ငါတို့ကြောင့်ဖြစ်သည် ESL စျေးနှုန်းအခြားသူများ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်၊ ကူးယူခံရခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မထားရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ESL tag ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ပြည့်စုံသည် ESL tag ၄ င်းစနစ်တွင်အပိုင်းလေးပိုင်းပါဝင်သည်။ အဓိကကွန်ပျူတာ PC၊ ESL tag နှင့်စမတ်လက်ကိုင် terminal ကိုပစ္စည်းကိရိယာများ။
ESL tag ပထမအချက်အနေနှင့်ဒေတာဘေ့စ်ရှိကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များကိုအိမ်မှကွန်ပျူတာဖြင့် encode လုပ်သည် ESL tagလျှောက်လွှာဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ ထို့နောက်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်အခြားအချက်အလက်များကို Ethernet (သို့မဟုတ် serial Communication port) မှတစ်ဆင့် exciter သို့ပို့လွှတ်သည်။ ထုတ်ကုန်ဒေတာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအဆိုပါ RF ရေဒီယို signal ကိုတစ်ခုလုံးကိုစတိုးဆိုင်မှစလှေတျတျောသည် exciter စက်ဝိုင်းအင်တင်နာကိုမောင်း။
The ESL tag system တွင်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။ point-to-point နှင့် group send ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ host ကွန်ပျူတာသည်သတ်မှတ်ထားသောဒေတာသို့ data ကိုပေးပို့နိုင်သည် ESL tagသို့မဟုတ်အားလုံး ESL tags များ တစ်ချိန်ကထိန်းချုပ်ယူပါ။ ESL tag actually စင်ပေါ်အားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွင်ထည့်သွင်း။ စျေးနှုန်းအညွှန်းကိုကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ငွေရှင်းကောင်တာနှင့်စင်ပေါ်အကြားစျေးနှုန်းကိုက်ညီမှုရှိခြင်းတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကို ESL tag သက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားကိုသိုလှောင်ထားပြီးအရောင်းဝန်ထမ်းသည် smart handheld terminal ပစ္စည်းကိရိယာ၏အကူအညီဖြင့်အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ESL စျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ပါ?
၁ ။ ESL စျေးနှုန်း အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအလိုအလျောက်၊ အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကြိုတင်သတိပေးစနစ်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအီလက်ထရောနစ်စက္ကူမျက်နှာပြင်စွမ်းဆောင်ရည်၊ စာဝှက်ထားသည့်ဒေတာများ၊ ၅ နှစ်ကျော်ဘက်ထရီသက်တမ်း
၂ ။ESL စျေးနှုန်း အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်
တစ်ကြိမ်နှိပ်ရုံဖြင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ ဝေးလံသောစနစ်ဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ ESL အလိုအလျောက်စက်လည်ပတ်မှုယန္တရား၊ ပါဝါပြတ်တောက်ပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ခြင်း၊
၃ ။ ESL စျေးနှုန်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စစ်ဆင်ရေး
မျက်နှာပြင်စုံပြောင်းခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောတင်းပလိတ်၊ ထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဝန်းကျင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကိုပံ့ပိုးပါ။
လက်တွေ့ကျတဲ့လျှောက်လွှာအတွက်: ESL စျေးနှုန်း၀ ယ်ယူသူများ၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်၊ လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ဗဟိုလည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက်စတိုးဆိုင်တွင်သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းသယ်ဆောင်သူ၊ စားသုံးသူများ၊ စတိုးဆိုင်များသည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းတို့ကိုလည်းမှတဆင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ESL စျေးနှုန်းစားသုံးသူများ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်၊ စုဆောင်းရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်လည်ပတ်စေရန်နှင့်စတိုးဆိုင်များကိုပိုမိုတိကျသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်လက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက်အချက်အလက်များပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များဖြစ်သည့်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းခွဲခြင်း၊ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းများ၊ သီးခြားအဆက်အသွယ်များ၊ အရင်းအမြစ်များမရေရာသည့်နေရာများနှင့်နောက်ဆုံးစျေးကွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခြေရာခံရန်အခက်အခဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိကျမှန်ကန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘားဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ESL စျေးနှုန်း. ထိုအခါစျေးကွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့, ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး, ခြေရာခံ, Real-time ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်အစား ၄၅ မီလီမီတာ (V) * ၈၉ မီလီမီတာ (H) * ၁၃.၅ မီလီမီတာ ())
အရောင်ပြသရန် အနက်ရောင်၊ အဖြူ၊ အဝါရောင်
အလေးချိန် ၄၄ ဂ
resolution 296 (H) × 128 (V)
Operating အပူချိန်0~ 50 ℃
သိုလှောင်အပူချိန် -10 ~ 60 ℃
ဘက်ထရီသက်တမ်း5နှစ်
ငါတို့အများကြီးရှိတယ် ESL စျေးနှုန်း သင်ရွေးချယ်ရန်အတွက်သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်အစဉ်အမြဲရှိသည်။ ယခုသင်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ dialog box မှထွက်ခွာနိုင်ပြီ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားဆက်သွယ်မည်။
MRB ESL စျေးနှုန်း tag HL290 ဗီဒီယို
ရှေ့သို့ အေးခဲနေသောအစားအစာများအတွက် MRB အီလက်ထရောနစ်စျေးနှုန်း HL213F
နောက်တစ်ခု: MRB အီးမှင်ဈေးနှုန်း HL420
အီး Ink Esl
အေးခဲနေသောအစားအစာများအတွက် MRB အီလက်ထရောနစ်စျေးနှုန်း HL213F
MRB ESL တံဆိပ်စနစ် HL750
MRB ESL အခြေစိုက်စခန်း HLS01
MRB အီလက်ထရောနစ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းတံဆိပ်စနစ် HL213
MRB ဒီဂျစ်တယ်စျေးနှုန်း tag HL154